Nkwekọrịta omenala na nkwekọrịta R & D Apicmo cdmo Manufacturers
anyị Ọrụ > Nkwekọrịta omenala na nkwekọrịta R & D
Ụzọ mmegharị ụkwụ
Nhazi usoro-site na grams site n'aka Metric Tons
Ọpụpụ ọ bụrụ na achọrọ
Nkwado nyocha zuru ezu gụnyere HPLC, GC-MS na NMR
Maka ngwaahịa ebe usoro nhazi di ugbua, APICMO nwere ike inye nkwekorita na oru n 'onu ahia nke onye nkata. Na mgbakwunye na ọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, anyị na-enyekwa ọkachamara ọrụ ntinye ihe onwunwe (ọ dịghị ụgwọ ọzọ) iji hụ na, n'ebe ọ bụla o kwere omume, anyị na-eji isi ihe ndị dị elu na ahịa ahịa asọmpi.
APICMO nwekwara ike ịnye nyocha ọchụchọ na ọrụ mmepe ka ndị ahịa chọrọ. Anyị nwere ihe ndekọ dị mma maka ịmepụta ihe mgbagwoju anya maka ihe ndị siri ike maka ndị ahịa anyị na ọrụ anyị nwere ike ịdabere na nkeji oge niile (FTE) ma ọ bụ ọnụego kwa ụbọchị. Kpọtụrụ anyị ka anyị chọpụta otú ndị ọrụ R & D anyị nwere ike isi nwee ike ime ka ọrụ gị ọzọ nwee ọganihu ọhụrụ.
Nkeji edemede Categories Họrọ Atiya Ọdịnaya CMO (2) Ihe ọmụma ahụike (7)
Akwụsịla n'oge a
Ihe Niile I Kwesịrị Ịma Banyere Pyridines 08 / 30 / 2018
Otutu ihe omimi nke di n'uwa 08 / 28 / 2018
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ogige aghara 08 / 28 / 2018
2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Chemical Abstracts Services) Ndenye aha 22536-61-4 08 / 18 / 2018